Paris: Labo ruux oo la hareereeyay - BBC News Somali
Paris: Labo ruux oo la hareereeyay
9 Jannaayo 2015
Faransiiska ayey haatan ka jirtaa labo dhacdo oo aan guul laga gaarin. Waqooyiga magaalada Paris, boqolaal boolis ah ayaa isku hareereeyay labo xagjiriin ah oo looga shakisan yahay inay fuliyeen weerarkii dhimashada keenay arbacadii ee wargeyska Charlie Hebdo.
Labada walaalo, Said iyo Cherif Kouachi, ayaa isku qarinaya dhismo ay leedahay shirkad wax daabacda magaalada Dammartin-en-Goele. Afhayeen u hadalay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in booliska ay isku dayayaan inay la xiriiraan labada nin iyagoo si taxadar leh uga fogaanayo in waxyeelo nafeed dhacdo.
Sarkaal deegaanka ah ayaa sheegay in hal ruux lagu haysto halkaasi. Ardayda iskuulo halkaasi ka dhawaa ayaa goobta laga daadgureeyay. Duulimaadyada madaarka ugu weyn Paris ayey sidoo kale waxyeeleysay iyadoo la badalay hababka degista iyo duulista.
Dhinaca kale, feejignaan ammaanka ah ayaa ka jirta goob Paris ku taal uu nin hubeysan ku xabadeeyay suuq Yahuudu leedahay halkaasi oo dhowr lahyaste uu ku qabsaday. BBC-da ayaa loo sheegay in halkaasi shan ruux lagu dilay.